You are here: Home somal Shirkada SOMTEL oo maalgalin ku samaysay Booga wax qabadka Xidhiidhlka Kubada Cagta S/land
ugu horeyn uga mahad celiyay Shirkada SOMTEL oo gacan laxaad leh ka sii say daabacaada Buugan. Waxa kale oo uu ka hadlay caqabado dhowr ah oo hortaagnaa intii uu meesha uu joogay,
Caqabadahaas oo uu aad ugu noox nuuxsaday in ay ta ugu wayni tahay farogalin lagu faro galinayo shaqadiisa taasi oo kaga imanaysa dhanaka sare , waxaanu carabka ku dhuftay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Waxa kale oo uu halkaas ka sheegay in ay sanadkan wax badani u qabsoomeen, inta u hadhayna waxa uu sheegay inay intaa dadaalkooda ka sii libin laabi doonaan, waxaasu ka afeeftay in aan shaqadiisa lagu soo faro lagin, cid walibana fahanto doorka ay ku leedahay maamulida dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Waxa kale oo halkaas ka hadlay wasiirka madaxtooyda Xirsi oo isna halkaas hadalo kooban oo dardaaran iyo dhiiri galin iskugu jirta ka soo jeediyay, labada dhinac ee xurguftu ka dhexeysana halkaas ugu soo jeediyay in la soo dhex gali doono arinkooda lana dhamayndoono.
Waxa kale oo isna madashaa ka hadlay Wasiirka Ganacsiga A/risaaq, waxa uu u soo jeediyay dhiiri galin iyo bogaadin maamulka Dhalinta iyo Ciyaaraha, Khaliifkana wuu iska dhamaandooo.